नेपाली चलचित्र ‘तारेभीर’को आफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो सहित) – ABC KHABAR
May 23, 2017 May 23, 2017 ABC Desk Slider, कला, भिडियो
काठमाडौं, ८ जेठ । प्रेम सुब्बाद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘तारेभीर’को अफिसियल ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो चलचित्रको अफिसियल ट्रेलर सँगै तिन वटा गीत देखाईयो । आउँदो असार २ गतेबाट दर्शकमाझ आउँदै गरेको सो चलचित्रको सार्वजनिक अफिसियल ट्रेलरमा एक्शनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
चलचित्रलाई नेक्स्ट जेनेरेशन ईन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि.को ब्यानरमा डि.के. देवानले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रको अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित निर्माता देवानले भने ‘फिल्ममा निर्माता सँगै सानो रोलमा दर्शकमाझ उपस्थित भएको छु । दर्शकहरुले फुल मनोरञ्जन लिनेछन् ।’ साथै, निर्माता देवानले चलचित्रको बारेमा जानकारी गराउँदै ‘तारेभीर’को सम्पुर्ण टिमलाई धन्यावाद दिए ।
“Tarebhir” Nepali film Trailer release
चलचित्रको छायाङ्कन भने काठमाडौं, दोलखा, सिन्धुली लगाएतका रमणीय ठाउँहरुमा गरिएको छ । निर्देशक प्रेम सुब्बाका अनुसार दैनिक पत्र पत्रिकाहरुमा आउने घटनाहरुलाई ‘तारेभीर’ले पर्दामा प्रस्तुत गर्नेछ । त्यस्तै, प्रहरी प्रसाशन लगाएतको वास्तबिक कुरालाई फिल्ममा प्रस्तुत गरिएको बताउँदै निर्देशक सुब्बाले भने ‘‘तारेभीर’ फिमेल ओरिन्टेड सँगै देशभक्ती फिल्म हो ।’ फिल्ममा बिष्णु चेमजोङ, नविन कार्की, रेखा फागो, रमेश सिंह,प्रेम सुब्बा, डि.के. देवान, दिपेश श्रेष्ठ, अजय कुमार माझी, मञ्जु श्रेष्ठ, रञ्जित राणा, निर्मल थापा लगाएतको मुख्य भुमिका रहेको छ । चलचित्रको लीड अभिनेत्री बिष्णु चेमजोङ भने नेपाल बाहिर भएकी हुनाले कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकिनन् । अन्य कलाकारहरु रेखा फागो, नविन कार्की, मञ्जु श्रेष्ठ भने उपस्थित थिए ।
Rekha Phago, Tarebhir Nepali film
कार्यक्रममा उपस्थित नव नायिका रेखा फागोले डेब्यु मुभि भएपनि आफ्नो क्यारेक्टरलाई उत्कृष्टता दिने प्रयास गरेकी बताईन् । साथै, उनले ‘तारेभीर’ टिम सँग काम गर्न पाउँदा लक्की फिल गरेकी बताउँदै फिल्ममा लीड अभिनेत्रीको बहिनीको रोलमा अभिनय गरेकी बताईन् । त्यस्तै, अर्को लीड कलाकार नविन कार्कीले चलचित्रको बारेमा बोल्दै भने, ‘‘तारेभीर’मा नयाँहरुको बाहुल्यता भएपनि राम्रो काम गर्ने कोसिस गरेका छौं ।’ त्यस्तै, चलचित्र आफुले कथा अनुसारको प्रस्तुती दिएको बताउँदै उनले दर्शकहरुलाई ‘तारेभीर’लाई साथ दिन आग्रह पनि गरेका छन् । ‘तारेभीर’को सो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथीको रुपमा बरिष्ठ कलाकार हरिबंश आचार्य उपस्थित थिए । उनले ‘तारेभीर’ टिमलाई सफलताको शुभकामना दिएका थिए ।
चलचित्रको कथा पनि निर्देशक सुब्बाले नै लेखेका हुन्, भने गोबिन्द राई र दिनेश मान्गमुको नृत्य निर्देशन रहेको छ । त्यस्तै, जनक गुरुको द्वन्द निर्देशन रहेको छ । चलचित्रको गीत संगीतलाई प्रकाश गुरुङ, सनुप पौडेल लगाएतले संगीतबद्ध गरेका हुन् ।
Tagged Nepali film Tarebhir नेपाली चलचित्र